Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. १५ किलो सुनचाँदी प्रकरण : अनुसन्धान युनुस अन्सारीतिर मोडियो, प्रहरीबाटै पनि भयो गल्ती – Janata Live
१५ किलो सुनचाँदी प्रकरण : अनुसन्धान युनुस अन्सारीतिर मोडियो, प्रहरीबाटै पनि भयो गल्ती
काठमाडौं, १७ साउन । सुन्धाराबाट बरामद साढे १४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन तस्करीको घटनामा प्रहरीले नक्कली भारतीय रुपैयाँ कारोबारमा जेलमा रहेका युनुस अन्सारीको ‘कनेक्सन’ खोज्न थालेको छ ।
तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त युनुसकै पूर्व साझेदार भएको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धानमा उनको ‘कनेक्सन’ खोज्न थालेको हो । यद्यपि, घटनामा कमिसन पाउने चक्करमा प्रहरी अधिकारीबाटै समेत त्रुटि भएको पाइएको छ ।
तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त पर्साका इल्ताफ हुसेन अन्सारी युनुसकै पूर्वसाझेदार भएको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको एउटा पाटो युनुसतिर मोडेको छ । इल्ताफ नक्कली भारतीय रुपैयाँ तस्करीमा यसअघि जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् ।
प्रहरीका अनुसार युनुस र इल्ताफले संयुक्त रूपमा नक्कली भरतीय रुपैयाँको कारोबार गर्थे । युनुसकै छत्रछायाँमा इल्ताफ नक्कली भारतीय रुपैयाँ कारोबारमा संलग्न भएको प्रहरीको दाबी छ ।
यसैलाई आधार मानेर प्रहरीले १४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन तस्करीमा युनुसको संलग्नता खोज्न थालेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान विभिन्न कोणबाट हुन्छ र एउटा कोण युनुसतर्फ केन्द्रित भएको साँचो हो ।
तथ्य के आउला पछिको कुरा हो । इल्ताफ र युनुस नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबारमा विगतमा सँगै संलग्न भएको घटना स्थापित नै छ । त्यसो हुँदा अहिले पनि यी दुईबीच सम्बन्ध हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसैले अनुसन्धान गरिनु स्वाभाविक हो ।’
नक्कली भारतीय रुपैयाँ कारोबारमा पटक–पटक पक्राउ परेका युनुस अहिले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । मंगलबार सुन्धाराबाट एकाएक गायब भएको स्कार्पियो अन्सारीकै निवासस्थल नख्खिपोट क्षेत्रमा भेटिएका कारण पनि घटनामा दुईबीच सम्बन्ध हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले पनि अनुसन्धान युनुससँग केन्द्रित रहेको संकेत गरे । उनले भने, ‘घटना गम्भीर छ । गम्भीर ढंगले अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता घटनामा विगतका दिनमा अपराधमा संलग्न अनुसन्धानको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हो । सत्य–तथ्य अनुसन्धानपछि खुल्ने विषय हुन् ।’
५७ लाख खर्चेर चाँदीमा जलप
प्रहरीले बरामद गरेको साढे १४ किलो चाँदीमा ५७ लाख रुपैयाँ खर्चेर सुनको जलप लगाइएको खुलेको छ । जलप लगाउने कार्यमा संलग्न मनीष मल्लिक पक्राउ परेलगत्तै यो तथ्य खुलेको हो । उनी बिहीबार पक्राउ परेका थिए । पक्राउ लगत्तै लिइएको बयानमा उनले बरामद चाँदीमा ५७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुनको जलप लगाई दिएको स्वीकार गरेका छन् । उनी सुनचाँदीको गरगहना बनाउने कालिगढ हुन् ।
न्युरोडको सुनपसलमा कार्यरत उनको कौशल पटेलसँग चिनजान थियो । पटेलकै निर्देशनपछि उनले चाँदीमा सुनको जलप लगाइदिएका थिए । कौशलको लाजिम्पाटमा जेम एन्ड ज्वेलरी नामको सुनपसल छ । लामो समयदेखि लाजिम्पाट क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी जवान बहादुरसिंह कठायतसँग उनको त्यहीँ चिनजान भएको थियो ।
घाटा उठाउन सुराकी, कमिसनका चक्करमा डिएसपी पनि
अनुसन्धानमा कमिसन पाउने चक्करमा प्रहरी अधिकारीबाट केही त्रुटि भएको पाइएको छ । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न काठमाडौं परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने, ‘घटनालगत्तै अनुसन्धान भयो । रिपोर्टिङ भए जस्तो घटना अनुसन्धानपछि देखिएन । बुझ्दै जाँदा तस्करसँग प्रहरी जवान मिलेको देखियो ।
उनीहरूले डिएसपीलाई गलत रिपोर्टिङ गरे । तर, डिएसपीले त्यसलाई बुझ्न सकेनन् । सुन पक्राउपछि आउने वैध कमिसन पाउने लोभमा पनि उनी कहीँ–कतै परेजस्तो देखिन्छ । अर्को जस पाउने चाहनाबाट पनि प्रेरित भएको देखिन्छ । त्यसैले उनले माथि रिपोर्टिङ ढिलो गरे । त्यसो हुँदा घटना रहस्यमय बन्न पुग्यो ।’
सुनको कारोबारमा संलग्न कौशल पटेल व्यवसाय उकास्न चाहन्थे । सुन तस्करमा संलग्न पर्साका इल्ताफ हुसेन अन्सारीसँग उनको कारोबारकै क्रममा चिनजान थियो । यही क्रममा उनले हुसेनबाट साढे १४ केजी चाँदीमा सुनको जलप लगाउने जिम्मा पाए । उनले चाँदीमा जलप लगाउन भने न्युरोडको सुन पसलमा कार्यरत मनीषलाई दिए । चाँदीमा सुनको जलप लगाउन मात्रै ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनलाई थाहा थियो ।
अनुसन्धानमा सहभागी एक अधिकारीले सुनाए, ‘जलप लगाइएको साढे १४ केजी चाँदीमा आधा किलो सुनको टुक्रा मिसाई तस्कर गर्ने योजना इल्ताफको थियो । योजनामा उनी पनि सामेल थिए । सोही क्रममा स्थानीय प्रहरीलाई मिलाउने जिम्मा उनले पाएका थिए ।
यसबापत उनले कमिसन पाउने पक्का थियो । तर, काम सजिलो थिएन । उनले तस्कर गर्न लागिएको सुन, सुनको जलप र चाँदीको मूल्य हिसाब गरेर जोडे । हिसाब एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै निस्कियो । अब घटनाको सुराक प्रहरीलाई दिँदा वैध रूपमा आउने सुराक भत्ताको उनले हिसाब गरे । फाइदा रामै्र हुने देखे ।’
ती अधिकारीका अनुसार अब उनको दिमागमा दुईवटा योजना फुर्‍यो । पहिलो योजना सफल भए इल्ताफबाट कमिसन लिने, विफल भए वैध रूपमा पाउने सुराक भत्ता लिने । तीर जुन चल्दा पनि सिकार मार्ने मनसायबाट प्रेरित उनले आफ्नो योजना नियमित सम्पर्कमा रहेका प्रहरी जवान बहादुरसिंह कठायतलाई भने ।
कठायतले योजना अर्का प्रहरी जवान प्रसन्न श्रेष्ठलाई भने । फाइदा हुने भएपछि कौशलको योजनामा दुवै सहजै सामेल भए । घटनमा भाइ देवान पटेललाई पनि सहभागी गराए । अनि उनी तस्करका मुख्य योजनाकार इल्ताफ र प्रहरी जवान कठायत दुवैसँग दोहोरो सम्पर्कमा बसे ।
ती अधिकारी थप्छन्, ‘योजनाअनुसार नै जवान कठायतले प्रहरी ‘मुभमेन्ट’को सबै योजना कौशललाई रिपोर्टिङ गर्थे, कौशलले इल्ताफलाई । यही क्रममा मंगलबार सबेरै सामग्री तस्करीको योजना बन्यो । तर, त्यस दिन प्रहरीको मुभमेन्ट अन्य दिनभन्दा बाक्लो हुने देखियो । तस्करी सफल नहुने जस्तो लागेपछि उनीहरू अब कानुनी रूपमा प्राप्त हुने वैध कमिसन लिने पक्षमा उभिए ।’
योजनाअनुसार सामग्री बा.६च ५५१९ नम्बरको स्कार्पियोमा राखियो । स्कार्पियो इल्ताफ आफैले हाँके । भित्र बसेर उनलाई सघाइरहेका थिए अन्य दुई भाइले । कौशलले स्कार्पियो सेराटन होटेलबाट कमलपोखरी हुँदै कमलादीबाट जाने योजना बताए ।
उक्त योजना प्रहरी जवान कठायतले अर्का प्रहरी जवान श्रेष्ठलाई भने । श्रेष्ठमार्फत योजना महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबामार्गका डिएसपी रञ्जन दाहालसमक्ष पुग्यो । रञ्जनलाई प्रहरी जवान श्रेष्ठले तस्कर गर्न लागिएको सबै सामग्री सुन भनेर रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
तस्करीको रुट महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको क्षेत्रभित्र पथ्र्यो । घटनाको जानकारी कमलपोखरी वृत्तमा दिँदा पक्राउ पर्ने सुनको कमिसन त्यहाँका अधिकारीसँग पनि बाँड्नुपथ्र्यो । सुन पक्राउको जस पनि अरूले नै लिन्थ्यो । त्यसो हुँदा डिएसपी रञ्जनले तस्करलाई आफ्नै क्षेत्रमा ल्याएर पक्राउ गर्ने योजना बनाए । सोहीअनुसार कमलादीमा एम्बुस थापेर बसे ।
अनुसन्धानमा सहभागी अधिकारीले सुनाए, ‘तर, सामग्री बोकेको गाडी त्यो रुटबाट आएन । किनकि त्यहाँ प्रहरीको एम्बुस भएको सूचना कठायतबाट कौशल हुँदै इल्ताफले पाए । त्यसवेलासम्म स्कार्पियो सडकमा निस्किसकेको थियो । आत्तिएका कौशलले इल्ताफलाई रुट बदल्न भने । सोहीअनुसार इल्ताफले रुट बदले ।
कौशलमार्फत जानकारी पाएका प्रहरी जवान कठायतले गाडीको पिछा गरे । योजना असफल हुने पक्का भएपछि कौशलले तस्करीका लागि तयार सामग्री पिछा गर्दै आएको मोटरसाइकलमा सवार कठायतलाई दिन भने । यसबापत स्कार्पियो पक्राउ नगर्ने वचन कठायतले कौशललाई दिइसकेका थिए ।’
सोही योजनाअनुसार स्कार्पियो सुन्धारामा रोकियो । स्कार्पियोबाट एकजना तस्करको सामग्री र दुई थान पेस्तोल पोको पारिएको झोलासहित झरे । कठायतले उनलाई नजिकै रहेको ओभरहेड ब्रिजमा लिएर गए । सामग्री बुझे । अनि स्कार्पियोलाई बिदा गरे ।
लगत्तै सामग्री बरामद भएको, तर गाडी फुत्किएको रिपोर्टिङ डिएसपी रञ्जनलाई दिए । रञ्जन तुरुन्तै घटनास्थल आइपुगे । तर, घटनाको पृष्ठभूमि उनले बुझ्दै बुझेनन् । सोही कारण उनले घटनाको रिपोर्टिङ माथिल्लो निकायमा निकै पछि गरे । त्यसवेलासम्म स्कार्पियो सानेपा पार गरिसकेको थियो ।
हिरा लुटमा समेत जवान कठायत र श्रेष्ठ संलग्न
प्रहरीका अनुसार गत चैतमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–५ चौकीटारकी ७० वर्षीया धनलक्ष्मी गुरुङको घरमा हिरा लुट्ने घटनामा समेत प्रहरी बहादुरसिंह कठायत र अर्का जवान प्रसन्न श्रेष्ठ संलग्न थिए । तर, त्यसवेला उनी पक्राउ परेका थिएनन् ।
प्रदेश ३–०१ –०२२ च ३३ ६२ नम्बरको फोर्ड कम्पनीको गाडीमा हिरा लुट्न जानेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गकै २६ वर्षीय प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असइ० सुरेन्द्र बसेल, प्रहरी जवानहरू वीरबहादुर बस्नेत र हेमकान्त पुनमगर त्यसै वेला पक्राउ परेका थिए । घटनामा पत्रकार सुजन आचार्य समेत पक्राउ परेका थिए ।
काठमाडौं, २६ साउन । आफ्ना विदेशमन्त्री एस। जयशंकरले गौतम बुद्धलाई महान् भारतीय भन्दै दिएको अभिव्यक्ति भारतले सच्याएको छ । भारतीय विदेश...
राहतमा कुहेको चामल, २ हजार १८४ परिवारलाई बाँडेको चामल गुणस्तरहीन
भोजपुर, २५ साउन । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा राहतको चामल गुणस्तरहीन पाइएको छ । गाउँपालिकाले खडेरी र कोभिड–१९ प्रभावितलाई बाँडेको...
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ७८ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या २२ हजार ५ सय ९२ पुग्यो
काठमाडौं, २४ साउन । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३७८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । शनिबार स्वास्थ्य...
सडकमै कार्यालय स्थापना गरी ढाट लगाएर सडक उपभोग दस्तुर उठाउने प्रणालीको अन्त्य हुने भएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विद्युतीय...
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मोटरसाइकल चलाउन पनि ड्राइभर
खोटाङ, २१ साउन । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मोटरसाइकल चलाउन नजान्ने भएपछि खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाले चालक राखेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि...
काठमाडौँ, २१ साउन । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण करिब पाँच महिना लामो प्रतिबन्धपछि भदौ १ गतेदेखि उडान सुरु हुँदैछ । यसबीचमा...
मध्यरातमा काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस
काठमाडौं, २१ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार मध्य राति भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प केन्द्रका अनुसार राति ११ बजेर...
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ५१ जना संक्रमित, उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ६८५ पुग्यो
काठमाडौंं, १९ साउन । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ५१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज...
लकडाउनमा चार अर्बको तरकारी भारतबाट आयात, नेपालको तरकारी कुहिंदै
बौद्धको निकै नै दुर्लभ र लोभलाग्दा तस्बिरहरु, तपाइँको फेसबुक वालमा सुरक्षित राख्नुस्
आज बिहीबार, राम्रो छ यी ४ राशिका व्यक्तिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
सेयर गरौं हजुर! माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस्, चाहेको सबै पूरा हुनेछ । ईन्कार नगरौं हैं।
आइतबारको दिनमा मुक्तीनाथको दर्शन गर्नाले मनोकामना पुरा हुने विश्वासका साथ २०७७ साल वैशाख २१ गतेको राशिफल पढ्नुहोस्
सुत्नु अघि श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#श्रीकेदारनाथ_मन्दिर
सात दिनभित्रमा तपाईंले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला ! कुन राशिका लागि कति शुभ ?
पाथिभरा माताको दर्शनसँगै तपाइँको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस्, र भेटी स्वरूप १ सेयर गर्नुहोस्
प्रदूषणमा पिल्सिएका नागरिक
काठमाडौंको हावा बिहान, बेलुका र राति प्रायः बहँदैन । त्यतिबेला यहाँको वातावरण बढी प्रदूषित हुन्छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाको बढी...
डा. यादवप्रसाद जोशी